HGH belata ibu na Thailand | Jiri Genotropin maka ida abụba na Bangkok - HGH Thailand | Ụlọ ahịa ọgwụ Bangkok | USA
HGH felata na Thailand | Jiri Genotropin maka ida abụba na Bangkok
Hormone mmadụ na-eto (somatotropin, HGH) Ọtụtụ ndị mmadụ Thailand ejikọtara ya na usoro nke ndị na-eme egwuregwu ahụ. Otú o si bụrụ - HGH nwere mmetụta siri ike nke anabolic, na-akwado ọganihu nke uru ahụ, na-ewusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na ọbụna na-akpata mmetụta nke nchịkọtaghachi zuru ezu. Maka ohere ndị a site na ikike iji belata abụba anụ na-emekarị ka ọ ghara ịhụ, ma na efu - hormone nke na-eto eto na-eme ka ọ dịkwuo mma.
Iji maa atụ, can nwere ike tụgharịa gaa na mmụta nke Mahadum Bangkok na 1998, ebe ndị okenye 24 natara ọgwụ kwa ụbọchị nke 2 mg - 5 mg HGH maka ọnwa isii. N'ime oge a, oke ahụ ha ebelataghị, mana ogo dị n’agbata akwara na adipose agbanweela nke ukwuu - na nkezi, onye ọ bụla sonyere na-enweta 5.5 pound nke akwara na, nke kachasị mkpa, kilogram 5.7 nke abụba tụfuru.
Ihe mara oke abụba mara n’afọ. Ka a sịkwa ihe mere oge ikpeazụ ọ bụ ọgwụ ọjọọ dịka Genotropin, jintropin na ansomone na ọgwụ ndị ọzọ na-eto uto nke oke maka ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-achọ belata pasent nke anụ ahụ.
Kedu ka H si ewepu ibu?
Akụkụ dị ukwuu nke akụrụngwa na-agba abụba na mmetụta ya na metabolism. Metabolism, A maara nke ọma na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sel ọ bụla nke ahụ mmadụ na-enweta ike ma ọ bụ glucose. Ma oburu n’eji homonụ nke anulinic Insulin na-achịkwa glucose dị n’ọbara, ọ̀tụ̀tụ̀ abụba abụba dị n’ hormone ahụ na-eto.
Ebumnuche ịchọrọ imezu oke abụba na mbelata abụba, bụ ịmanye sel iji rie abụba karịa glucose. Insulin abụghị azịza ya - ọ na - edobe glucose na ọkwa ọ bụla ma chekwaa ya na ntụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ na - eme ka mkpụrụ ndụ rie glucose, ọ bụghị abụba, n'otu oge na - abawanye guzobe acids nke imeju.
Mana HGH bụrụ ụdị ọgwụ mgbochi nke insulin, na-anwa ibelata ojiji nke glucose cell na ịmanye ya iri abụba. Iji mee nke a, ọ na - etinye onwe ya na akpụkpọ ahụ nke mkpụrụ ndụ abụba ma na - eje ozi dị ka usoro ụgbọ njem na - ebuga ha na ọdụdụ ọdụdụ, na - ebute ha n'ime ọbara, ma na - enye ha oxygen. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ na-agbanwe usoro nke ịba ọcha n'anya, ntụgharị belata ọnụ ọgụgụ mkpụrụ ndụ abụba.
Ma nke kachasị mkpa, enweghị mkpụrụ ndụ abụba HGH naanị ga-ahapụ ọdịnaya ya ma ghara ibibi ya. Ma ọ bụrụ na mkpụrụ ndụ nke ahụ ga-achọ abụba ndị nwere abụba, yana mmebi nke mkpụrụ ndụ abụba n'okpuru ọrụ nke uto hormone na-abawanye, yana nchịkọta abụba site na nkwụnye ego ga-abawanye, nke ga-eduga n'ibu.
Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ ichikota, ahụ ga-amalite iri abụba nke ya. Ma maka nke a, nke mbu, ịchọrọ oke hormone nke eto eto zuru ezu.
N’oge a na-achọkarị ịla n’iyi ka ọ dị mma ị toụ mmanya na ịbelata oke ibu - homonụ nke uto nke ọma anaghị emegide onwe ha. Karia homonụ thyroid dị mma, dịka thyroxine (100-150 µg kwa ụbọchị) ma ọ bụ triiodothyronine (25 µg kwa ụbọchị).
Ọ bụghị naanị na ha bụ ndị na -ebu abụba abụba, mana ọ bara uru na thyroid gland. Na oge uto uto na-eto eto, ọ chọrọ ya - HGH na-egbochi ọrụ ya ma ọ nwere ike bute mmụba ya, nke mere na homonụ thyroid n'oge a ga - enyere aka belata ngosipụta nke mmetụta ndị ọ na-akpata.
N'ezie, HGH bụ eke maka ahụ mmadụ. Dịka ọmụmaatụ, na afọ, olu nke "nke" ya na mmadụ belatara, nke mere na iweghachite inweta HGH site na mpụta bụ ihe na - adịghị emerụ ahụ, ọ kachasị karịa mgbe anaghị egbochi ya na - enweghị hormone na ahụ.
Nke a bụ ntakịrị mmetụta dị n'akụkụ HGH. A na-atụnyekarị ya na steroid (mmetụta yiri nke ahụ, ma na-eji ihe dị ka otu ìgwè nke mmadụ), mana ọ naghị emetụta mmepụta nke homonụ mmekọahụ, na n'ihi usoro ọrụ dị iche nwere nsonaazụ na-adịghị mma. Agbanyeghi na usoro uto nke uto achoghi ya ka emegharia ya, o na akokwa banyere nchekwa ya.
Na Thailand enwere akụkọ ifo na ojiji nke uto uto maka ịbelata ibu na-eduga n'ịba ụba nke ntị, imi, cheeks, ire, uturu, ọkpụkpụ (ya na ọdịdị nke jọrọ njọ nke ebe nkwonkwo), obi na anụ ahụ ndị ọzọ dị n’ime (dịka ọmụmaatụ nyere “ndị na-eme ahụ dị ime”) bụ ndị egwuregwu gbara nka, ndị torola eto ma ugbu a na-eme ka ime mmadụ nwee afọ ime).
Ihe a niile ga - eme, mana naanị mgbe ị jiri ọgwụ ahụ were oke ọgwụ ole ị tụrụ aro ya. Umu ozo HGH na-eme ka o buru ibu dika nke a.
Gbanyere na: HGH felata
Previous isiokwu Oge ịgba ogwu HGH, usoro ọgwụgwọ Genotropin IU na-atụ aro
isiokwu na-esonụ HGH Maka ụmụ nwanyị - Ọgwụ mgbochi Aging na Thailand